Dhowr iyo toban ka tirsan Dowladda federaalka ah oo qarax Naf hurnimo ku dhintay. – Shabakadda Amiirnuur
Dhowr iyo toban ka tirsan Dowladda federaalka ah oo qarax Naf hurnimo ku dhintay.
November 17, 2020 2:09 pm by admin Views: 82
Qarax Nafhurnimo iyo khasaare dhimasho iyo dhaawac leh sababay ayaa Maanta Dowladda Federaalka ah lagu beegsaday Gudaha Magaalada Muqdisho gaar ahaana Xarunta Baliiska ee loo yaqaan iskuul buluusiyo.
In ka badan toban xubnood oo Baliiska ka tirsan ayaa goobta ku dhintay waxaana ku dhawaacmay ku dhawaad 15 kale iyadoo Qaraxaan si weyn looga hadal haya Xafiisyada Dowladda Federaalka ah iyo guud ahaan Magaalada Muqdisho.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay Mas’uuliyadda qaraxa waxayna hoosta ka xariiqday in ay Khasaare xoog leh gaarsiiyay Baliiska Federaalka ah.
“Mujaahidiinta ayaa camaliyad istish-haadi ah ku beegsaday saldhigga kooxda Ridada ee Iskoola Boliiziyo magaalada Muqdisho, khasaaraha cadawga gaaray waa 12 dhimasho ah iyo dhaawaca 14 kale” ayaa lagu yiri warka Alshababaab ka soo baxay.
Goobta qaraxau ka dhacay iyo nawaaxigeedu waxay ka mid yihiin Meelaha habeen iyo maalinka aad loo ilaaliyo is looga hor tago weerarada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin sidaas oo ay tahay waxaa muuqata Alsahbaab ay ka gudubtay Koontaroolada qarashka iyo waqtiga badan lagu baxsho ilaalintooda oo ay beegsatay halkii bar tilmaameedka u ahayd.
Burbur xoogan ayaa ka muuqda goobta qaraxu uu ka dhacay waxaana durbadiiba Meesha xiray Booliska qaybta Miino baarka ee wada shaqeynta la leh Saraakiishi shisheeye ee Xalane degan kuwaasoo Baara goobaha qaraxyadu ka dhacaan.